३२ अर्बको अस्वीकृत चिनियाँ गाई फेरि ल्याइँदै, किन पर्‍यो यस्तो वाध्यता ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/३२ अर्बको अस्वीकृत चिनियाँ गाई फेरि ल्याइँदै, किन पर्‍यो यस्तो वाध्यता ?
काठमाडौं, १९ मंसिर । सरकारले नेपाली हावापानीमा अनुकूलन हुन नसक्ने चिनियाँ गाई ल्याउन फेरि प्रक्रिया थालेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि चिनियाँ गाई भित्र्याउने पहल भएको थियो । पशुसेवा विभाग र पशु विज्ञहरूले चिनियाँ गाई नेपाली हावापानी अनुकूल नभएको निष्कर्षसहित सुझाव दिएपछि सरकार पछाडि हटेको थियो ।
बाथरुममा लडेर घाइते भएकी २३ वर्षे ७ महिनाकी गर्भवती सबिनाको अस्पताल चहार्दा चहार्दै गयो ज्यान
उत्तर कोरियामा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि लकडाउनसहितको संकटकाल घोषणा